Sidee Indhahaagu ugu Wareegaan Degel | Martech Zone
Sida Ay Indhahaagu Ugu Wareegaan Websaydh
Talaado, Agoosto 5, 2014 Jimco, Febraayo 10, 2017 Douglas Karr
Hal abuurka, waxaan hubaa inuu jiro qof gudaha jooga oo ku qeylinaya iyaga si ay uga duwanaadaan iskana ilaaliyaan dhisida degel u eg una dhaqma sida dadka kale. Marka laga eego dhinaca suuq geynta, in kastoo, waxaan wax ku baranay martidayada in ka badan toban sano hadda waxa laga filayo degel websaydhka ah iyo sida loo maro mid waxtar leh. Isticmaal ahaan, ma jiraan wax aad u jahwareersan sida isku dayaya inaad hesho macluumaadka xiriirka, dib ugu riix bogga guriga, ama iskaan bogga si fudud markii aan loogu talagalin sida ku xusan xeerarka casriga ah.
Xogta hoose ee hoose, Singlegrain waxay ku midoobeen Crazy Egg inaad soo bandhigto macluumaad waxtar leh oo ku saabsan raadinta indhaha oo kaa caawin kara inaad horumariso khibrada isticmaale ee boggaaga.
Naqshadaynta jawaabta waxay ku dartay kakanaantaan - hubinta in naqshadeeyayaasha ay si sax ah u cabbiraan sawirada muuqaal walba oo ay bixiyaan isdhexgalka oo ah suulka oo kaliya! Taasi waxay ubaahantahay bogag sifiican looga fikiray oo si fudud loogu rogi karo, hel waxaad ubaahantahay, oo aad aqriso oo aad xafido.
Naqshadeeyahaaga ayaa laga yaabaa inuu damco inuu sameeyo wax aad u kala duwan… laakiin ha la yaabin marka taasi saameyn ku yeelato sicirka boodhka iyo is-beddelka iyada oo booqdayaashu ay niyad jabaan oo ay baxaan!
Tags: ukun waalandhaqdhaqaaqa indhaharaadinta indhahaFsida indhahaagu u dhaqaaqaanNaqshad wax ku ool ahsinglegraindegel f
10 Xaqiiqo oo kaa Yaabi Doona Arimaha Bulshada
Muxuu Xayeysiinta Dhaladka ah ee Shabakadda Dhaladku ka tixi doonaa